Peps na-ahụ maka oge opupu ihe ubi eze na ọnụahịa ahịa | Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Peps Natided Matle Edide Oke ka anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị na-esite nha ala ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla.Raybon Pep na mmiri, ego na saịtị na saịtị gosipụtara ọnụahịa. Nnwale ndị a gụnyere nnwale dabara adaba, nnwale & mmiri mmiri, ike ule, na nnwale ike ọgwụgwụ.